WARRAAQASA BILISUMMAA OROMOO OPDO HARKA GALCHUUN GABRUMMAA GARA BIRAAF OF QOPHEESSUUDHA. -
Simbirtuu Dhugaa | Muddee 17, 2017
Seenaa impayer Itophaa keessatti warraaqsa ummataa heddutu ta’ee dabre. Warraaqsota hundaa kan ukkaamsee dhimma itti bahe aangawoota barcuma mootummaa irra turan. Waan dabran irraa barachuu dhabuun calaqqee nama dura qabamu hundatti amanuun duukaa gugatuun boolla jeefa hin qabnetti of geessuu akka ta’e beekuu barbaachisa. Haalli biyyattiin har’a keessa jirtu haallan dabran irraa garaa garummaa qabaachuu male hin qabu. Warraaqsi ummata bal’aan dhoohu yeroo cufa abboota taayitaan liqimfamuu hin qabu.
Abbaan warraaqsaa beekkamaadha. Warraaqsa jalqabe bakka maluun gahuun isa qofa ilaallata. Ummatni bal’aan warraaqsa kan geggeessuuf firii gaarii argachuuf. Firii gaarii argachuuf ammoo warraaqsa isaa dabarsee abbama argetti laachuu hin qabu. FDG gara FXG tti tarkaanfate eessaa ka’ee eessa akka gahe kan beeku qaama warraaqsa kana eegalee eegalsiise qofa. Qaama kana warraaqsa kanaa ala baasuuf humnootni har’a shanachaan gadi yaa’anii dhiichisan danuudha. Warraaqsa kana afkuchuudhaan masakkuuf tattaaffiin isaan godhan hedduudha.
Namootni, gareeleen, humnootnii fi raacitoota warraaqsa kanaa warri ofiin jedhan QBO ABOn geggeeffamee arma gahe irratti abbaa ta’uuf gaarri bahanii fi bu’aa hin jirre hin jiru. quuqamtoota ummata bal’aa Oromoo ta’anii hennaa lallaban hin qaanfatan. Quuqamaan sabaa wareega lubbuu baasa. Kursii laafaa irra taa’anii daandillee bu’aa tolola yaa’uun warraaqaa nama hin gootu. Ummattootni biyyattii addatti ummatni Oromoo shira deemaa jiru kana hubatuu qaba.
Bu’aalee bubuutuu akka tolee dura qaban kanaan sobamuun irra hin jiraatu. Rakkoo walii galaa keessaa ba’uuf dura abbaa biyyaa ta’uu qaba. Ummata harka alagaa eeggatu irraa bilisoomee ummata alagaan harka isaa eeggatu ta’uu qaba. Seenaa hawaasa addunyaa biyya lafaa tana irra jiru keessatti ummatni biyya isaa irraa alagaadhaan buqqifamee biyyuma ofii irratti baqattummadhaan qubsiifamee alagaa harka eeggatu argamee hin jiru. Duuti du’a irra hamtuu kan kana caalte hin jirtu. Kanaaf kan baqate alagaa harka kajeeluu dhiisee gara qabsootti fuula galuu qaba. Qabeenya ofii alagaa irraa kajeeluun salphina salphina caale.
Dhalli Oromoo kan mootummaa Tigree irraa mindaa fi qajeelfama hojii eeggatus kana beekuu qaba. Dhala mindaa gaafatamu malee dhala mindaa alagaa gaafatu ta’uu isaa beekee warraaqsa kanatti fuula deebi’uu qaba. Abbaa dugda ofitti gale ta’uu hin qabu. OPDOn hamma Tigrootni of qopheessaniif ummata Oromoo qabsoo irraa daaddisaa jirtus of bartee qaama qabsoo kanaa ta’uu qabdi. Hamma TPLF haarayatti of ijaartee qindoomina addaatiin gadi deebituu ummata isaanii warraaqsa irraa cancala afaan kaahanii qabuun itti gaafatama seenaa dachaa jala galuu irraa akka isaan hin oollee beekuu qabu.
Gaaffiin deebii hin qabne tan gaafatamtu hin jirtu. Gaaffii ummata isaanii deebisuuf of kennuu qabu. Gaaffii ummataa deebisuuf ammoo dura dursanii of bilisoomsuu barbaachisa. Xurumbaa alagaan keessaan hafuura baafatu ta’uu irraa walaba of taasisuu qabu. Hawwii ummataa duukaa deemuu osoo hin taane hawwii ummataa dura deemuu isaan barbaachisa. Kaabbaa warraaqsaa uffatanii warraaqaa fakkaatanii ummata gara hin malletti gugsuun isaan irra hin jiraatu. Warraaqsa dhoohee biyyattii irra dambala’e keessa lixanii taaytaa matayyaa gonfachuuf gurdummachuun isaan irra hin jiraatu.
Gaaffiin Oromoo of irratti malee itophiyaa irratti abbaa haa ta’uu miti. Waan waliin hin deemne waliin oofuuf carraaquun karama kalee irra dhufame irra deebi’uuf tattaafatuu ta’a. Oromoon ummata hajajama malee ummata ummata biraatti hajamuu miti. Ulfina kana of irratti warra hin beeknetu har’allee ummattoota biraatti irkachuu barbaada. Irkoo ta’ee jiraachuun ummata Oromoof gahuu qaba. Biyya isaa irratti nama isaa irratti abbaa ta’uun ammoo yakkaa miti. Ummata irratti abdii dhabuun of irratti abdii qabaachuu dhabuu waan ta’eef qaamotni yeroo ammaa kana sochii ummata bal’aa karaa irraa butanii goda tokkummaa Itophiyaa jalattiin galuu barbaadan gochaa hammeenyaa akkasii kana irraa of adabuu qabu.
Ummatni keenya OPDO kalee jiruu fi jieenya isa dhoorgite itti amanee duukaa dhangal’uun dura dursee akeekaa fi kaayyoo isiin gadi fageenyaa beekuu qaba. OPDOn TPLF jalatti isa ukkaamsuuf qaama haala aanjessaa jirtu malee TPLF jalaa isa baasuuf qaama fiigaa jiru akka hin taane hubachuu qaba. Kanaaf warraaqsa abbaan dursu beekkamu fuudhanii harka OPDOtti galchuun gabrummaa baraneef of qopheessuu akka ta’e beekuun barbaachisaadha.
Gaaffii Oromoof deebii kan ta’u FXG ABOn hoogganamu finiinsuudhaan moohinsaan guduunfuu qofa ta’a.
2 thoughts on “WARRAAQASA BILISUMMAA OROMOO OPDO HARKA GALCHUUN GABRUMMAA GARA BIRAAF OF QOPHEESSUUDHA.”
“Waraabessatti foon hin fe’atan” jedha Oromoon. Kan Oromoon irraa bilisoomuu qabu fi kan Oromoo bilisoomsu eenyu dha? OPDO’n fakkii TPLF’n bixxilamee, afuura TPLF’tiin guutame, somba TPLF’n kan afuura baafatu, eenyu tajaajiluun akka tolfame hardha jaamaa fi duudaanu ni beekan. Kaleesaa “Kondomii” TPLF kan jedhamaa ture, uumama isaa hundee irraa osoo hin jijjiirratiin, yoo inni “bilisummaa kan isiniif fidu ana dha” jedhuu qeeqa fi shakkii tokko malee harka dhoofneefii ofitti fudhanna yoo tahe, nutu wanna bilisummaa, walqixxummaa fi dimokiraasiin tahan hin beeknu jechuu dha. Balleessaan kan OPDo osoo hin taane, kan keenya, kan warraa sheekko nutti odeeffame mara dugaa seenee duukaa yaanuu ti jechuu dha.
OPDO’n hunda dura wanna afaaniin lallaban san jiruun agarsiisuu qaban – atattamatti. Kunis, ajjeechaa Oromoo irraa dhaabsisu dandahuun eegala. Seeruma waraqaa irraa kaayanii waggoota 20 oliif irraanfatan sana jiruutti hiikuu jalqabuu jechuu dha. Dhaloota tokko guutuu gowwoomsaa bahanii, dhaloota lammaffaatti isumaan itti fufuu yaaluun hin dandahamu!
Waan qaban uffataniitu gabayaa deemu.
Dur Oromon ABO/WBOn nublisumsa jedheetu bara 50 obsee eeggachaa ture. Hamma edda dubbiin aka soba taate galteefii Oromon kan qabuti fayyadamuu malee carraa biraa hinqabu.